Window7အသုံးပြုသူများ အတွက် Theme Man Of Steel for Windows7~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
Window7အသုံးပြုသူများ အတွက် Theme Man Of Steel for Windows 7
5:55:00 am windows7 No comments
Window7အတွက် အသစ်ထွက်လာတဲ့ Theme တစ်ခုပါ..
Man Of Steel ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့်ဘော်ဘော်တွေ အကုန်သိကြမယ်ထင်တယ် :)
Window7အတွက်သာလျှင် ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ..
အသုံးပြုချင်ရင်တော့ Download လုပ်သွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...28 MB နီးပါးပဲ ရှိပါတယ်. :D
Theme ကို မထည့်သွင်းတတ်တဲ့.ညီအစ်ကိုတွေ ရှိရင်.. ကျွန်တော်ပြောပြပါ့မယ်ခင်ဗျာ.
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Rar file ကို ဖြည်လိုက်ရင်. အထဲက ဖိုင်တွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်..
"theme folder " ထဲက file နှစ်ခုကို Copy လုပ်ပါ..
ပြီးရင် C: >>Windows>>Resources>>>Themes ထဲကို Paste လိုက်ပါ..
ပြီးရင်တော့ Personalize မှာ ရွေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ :)
ပျော်ပျော်ကြီး ဒေါင်းလိုက်ကြဗျို့ . :
ဒေါင်းရန် .. ဒီမှာ ဆိုတာ ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူနိူင်ပါသည် ..